Daawo Video: Qeyla dhaan kasoo yeeraysa deegano ka tirsan Sh/Dhexe « AYAAMO TV
Daawo Video: Qeyla dhaan kasoo yeeraysa deegano ka tirsan Sh/Dhexe
1 of 1 " alt="Daawo Video: Qeyla dhaan kasoo yeeraysa deegano ka tirsan Sh/Dhexe" />
2733 Views Date April 18th, 2014 time 7:18 pm
Hay’adda ICRC ayaa soo saartay warbixin ka hadlay xaaladda biyaha ee Soomaaliya, waxayna warbixinta tilmaamaysaa dhibaatada biyo la’aanta ee ka jirta qeybo ka mid ah dalka Soomaaliya, Taleefishinka Universal ayaa warbixintani soo socota ku tusaaleynaya dhibtaada biyo la’aaneed ee ka jirta tuulada Qeylo Weyne ee degmada Warshiikh
Warbixin ay soo saartay hey’adda ICRC ayay kaga hadashay marxaladda biyo la’aaneed ee ka jirta Soomaaliya iyo baahida loo qabo, waxayna hey’adda ka warantey hawlo gargaar oo xagga biyaha ah oo ay Soomaaliya ka fulisey.
Waxa ay hey’addu sheegtey in abaaro iyo jiilaal soo noqnoqdey, iyo waliba masiibooyinka fatahaadda iyo duufaano iyo dagaalo dhacay ay waxyeelo weyn u geysteen ilihii biyaha ay dadka ka heli jireen, kuwaasii oo qaarkood gurey, qaarkoodna duugmey, kuwa kalana wasaqoobey.
waxa ay warbixintu sheegeysaa in illaa iyo 375 kun oo qof laga caawiyey in ay helaan biyo nadiif ah kadib markii loo surey riigag biyaha soo dhufanaya, kuwaasi oo loo qodey ceelal, loona dhisey baraago ay biyaha ku keydsadaan xiliyada ay roobabka da’aan.
Markii ay fataadaha ka dhaceen gobolka Shabeelada Hoose waxaa wasaqoobey, islamarkaasina duugmey illaa 19 ceel, kuwaasi oo 13 ka mid ah ay dib u habeyn ku samaysay hey’adda ICRC, sidoo kale gobolka Gedo abaaro ka dhacay waxa ay hey’adda biyo gaarsiisey dad gaaraya 42 kun oo qof, halka goboladda Bari oo duufaano ay ka dhaceen baraago laga qodey iyo booyado biyo lagu geeyey ay ka faa’iideysteen dad gaaraya illaa 4 kun oo qof.
Waxaad sawirada ka arki kartaan riig lagu rakibay tuulada Yaaq Bishaaro ee gobolka Jubbada Hoose oo isagu biyahu soo tufaya, dadkuna ay sidii roobkii ugu qubeysanayaan, halka xitaa xoolaha nool sida geela oo isagu darka ka cabaya.
Dabcan tuulada Qaayli weynee uma nasiib badna sida tuulada Yaaq Bishaaro, balse waa arrin rajo galineysa dadka Qeyli Weyni maadaamaa meel dalka ka mid ah laga xaliyey dhibaato tooda la mid ah, waxayna rajaynayaan in mar uun laga haqabtiro biyaha oo ah sheeyga koowaad ee nolosha ku tiirsantahay.
Dad badan oo Soomaali ah oo nasiibku saacidey oo guryahooda ay ku rakibanyihiin tuubooyin ayaa marka ay rubuneetada furaan durbadiiba waxaa oga soo hoora biyo nadiif ah, iyagoo maalina aanan ku fakarin in ay jiraan dad baahidooda ugu weyn ee maalin kasta heysata ay tahay biyo la’aan.
Dadka ku nool tuulada Qeylo Weyne ee degmada Warshiikh halganka iyo harjadka ay maalin kasta wajahaan waa sidii ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah, waxaadna arki kartaa carruur iyo cinroole, rag iyo dumar dadkii ku noolaa tuuladaasi ay dhamaantood dhexda u soo xirtey helista biyaho nadiif ah.
Wadaamo ka lusha xarko dhaadheer ayaa loo dhaadhicinayaa ceelka kaliya ee tuuladaasi ku yaala, iyadoo biyaha ay joogaan meel aad u fog , waxaadna arki kartaan sida loogu xiiqsanyahay in wadaanta ceelka laga soo saaro.
Wadaantu ma ahan mid qaad-weyn, waxayna kaliya soo xambaari kartaa biyo ka yar 10 litir, iyada oo dadka oo kaliya aysan ahayn kuwa ay tahay in ay ku haraad baxaan, waxaa sidoo kale biyaha la siiyaa xoolaha noocyadooda kala duwan, gaar ahaan geela oo lagu yaqaano in uu noolaha ugu biyo-cab badanyahay.
Mid ka mid ah odayaasha deegaanka Qeylo Weyne ayaa ka hadlaya baahida ay u qabaan in ay xal waara ka gaaraan helista biyaha
Dowladda Soomaaliya ayaa ah tan mas’uuliyadda koowaad ka saaranyahay in ay biyo ku filan u hesho dadka tuuladani iyo dabcan meelaha la midka ah ee dalka ku yaala, waxayna dadku jeclaan lahaayeen in marka hore ay dowladda ku dadaasho biyaha ka hor inta aanan shidaal iyo batrool laga hadlin soo saaristooda, kuwaasi oo aad oga fog meesha biyaha ay joogaan gunta dhulka.
Sidoo kale dadka deegaankani ay baahi weyn u qabaan masaajid ay ku cibaadeystaan iyo mandaraso caruurta ay wax ku bartaan, iyadoo hadda goobaha kaliya ee la heysto ay yihiin meelo la waabay oo aanan laga dugaashan karin dabeysha, dhaxanta, roobka iyo cadceeduba, waxayna dadka Soomaaliyeed ka codsayaan in ay gacan ka geystaan hawlahani samofalka ku salaysan.
?autoplay=1&wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark" frameborder="0" allowfullscreen>